गुल्मीबाट आयो दुखद खबर, ट्रकको ठ’क्क’रबाट २४ वर्षीय दुई युवकको घटनास्थलमै – Wow Sansar
गुल्मीबाट आयो दुखद खबर, ट्रकको ठ’क्क’रबाट २४ वर्षीय दुई युवकको घटनास्थलमै
December 29, 2020 143
काठमाडौ । गुल्मीमा ट्रकको ठ’क्कर’बाट आज बिहान दुई जनाको मृत्यु भएको छ । रेसुङ्गा नगरपालिका–१३ का २३ वर्षीय बालकृष्ण भुजेल र २४ वर्षीय टोपबहादुर रजालीको सो दुर्घटनामा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बुटवलबाट गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासतर्फ आउँदै गरेको ना५ख ३२०४ नंको ट्रकले रेसुङ्गा नगरपालिका–१३ अन्तर्गत मसिनेखोलामा उनीहरुलाई ठ’क्कर दिँदा दुवै जनाको घटनास्थलमै मृ’त्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक प्रवीणलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
ठक्कर दिने ट्रक र चालक गोपाल टण्डनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा राखेको छ । घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ
गुल्मीमा ट्रकको ठ’क्कर’बाट आज बिहान दुई जनाको मृत्यु भएको छ । रेसुङ्गा नगरपालिका–१३ का २३ वर्षीय बालकृष्ण भुजेल र २४ वर्षीय टोपबहादुर रजालीको सो दुर्घटनामा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
Prevतेल ट्यांकरले ठक्कर दिँदा साइकलमा सवार १३ वर्षीया बालिकाको ज्या’न गयो
Nextमाल्टामा आकर्षक रोजगारीको अवसर, तलब २ लाख ८२ हजारसम्म, सेवा शूल्क ३० हजार मात्रै !
यदि तपाईँ आफ्नो प्रेम पाउन चाहानु हुन्छ भने यी नाम भएका युवतीहरुसंग प्रेम गर्नुस जस्ले कहिल्यै प्रेममा धोका दिंदैनन
मध्यरात चिसोले रु’दै लगलग का’म्दै भेटिइन् यी आमा, ओढ्ने केहि छैन,सहारा दिने कोहि छैन,अवस्था यस्तो छ
बागलुङमा बाघसंग दोस्ती गर्ने दिपेन थापा आए काठमाण्डौ, कारण यस्तो,बाघसंगको दोस्तीबारे यसो भन्छन (भिडियो सहित) (3357)
का’टिएको हात खुट्टामा जोडिदिए पछि… (1358)
एकाबिहानै आयो खुसीको खबर ! सोच्नै नसक्ने गरि एकासी ह्वात्तै घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मुल्य ! (1139)
उडान बन्द गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा (1063)
कञ्चनपुरकी यी युवतीले फेसबुकबाट केटासँग लब गर्दा काेठामा लगेर घीनलाग्दाे हर्कत गरी बनाईदिए यस्ताे बिजाेग.. (680)